Militariga Soomaaliya oo howlgal ku dilay maleeshiyaada katirsan Arggagixisada Shabaab | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Militariga Soomaaliya oo howlgal ku dilay maleeshiyaada katirsan Arggagixisada Shabaab
Militariga Soomaaliya oo howlgal ku dilay maleeshiyaada katirsan Arggagixisada Shabaab
Muqsisho(SONNA) Ciidamada Militariga Soomaaliya ayaa sii kordhiyay howlgalada ka dhanka ah Maleeshiyada Shabaab,gaar ahaan deegaanada kuyaala xadka ay wadaagaan Shabeelooyinka oo ay ku sugan yihiin cutubyo katirsan ciidanka Xoogga Dalka.
Wararka ka imaanaya deegaanka Basra ayaa sheegaya in iska hor imaad kooban uu duleedka deegaankaasi ku dhexmaray ciidamo ka tirsan Militariga Soomaaliya oo howlgalo waday iyo maleeshiyaad katirsan Arggagixisada Shabaab oo halkaasi ku dhuumaalaysanayay.
Abaanduulaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Janaraal C/llaahi Cali Caanood ayaa Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA u xaqiijiyay in 3-ka tirsan Shabaab lagu dilay howlgalkaasi halka 4-kalena looga dhaawacay.
Janaraal Caanood ayaa sheegay in howlgaladani ay qeyb ka yihiin gulufka ka dhanka ah maleeshiyada Shabaab oo la doonayo in guud ahaan laga sifeeyo dalka.
Next articleMaydka Taliyihii Ciidanka nabad galyada wadooyinka oo Muqdisho lagu Aasay